- | देवेन्द्र पौडेल, संगठन विभाग प्रमुख, नयाँ शक्ति, नेपाल डा.बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्दै एकीकृत माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा लागेका देवेन्द्र पौडेल अहिले नयाँ शक्ति नेपालको संगठन विभागका प्रमुख छन् । संगठन निर्माणका लागि देश दौडाहमा निस्केका पौडेलसँग नयाँ शक्तिको राजनीतिक–वैचारिकका साथै संगठनातात्मक तयारीवारे नेत्र पन्थीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
तपार्ईं नयाँ शक्तिको संगठन विभागको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । देशभर दौडिनुभयो । केन्द्र र जिल्लामा बुझाई कस्तो पाउनुभयो ? – नेपाली समाजको आकंक्षा र चाहना तीव्र गतिमा देशमा परिर्वतन आईदिए हुनथ्यो भन्ने देखिन्छ । यही अनुसार राणाशासन अन्त्यका लागि जनताले साथ दिए । पंचायतको विकल्पमा जनता अगाडि आए । राजतन्त्रका अनत्यका लागि खुलेरै लागे । यसका कारण नेपाली जनताको चरित्र तीव्र गतिमा केही न केही होस भन्ने छ । हामी तल पनि यो पाउँछौँ । यसका साथसाथै तलपनि अर्को चरित्र के छ भने धेरैजसो केही न केही रुपमा संगठित रुपमा बाँधिएर रहेको छ । स्वतन्त्र रुपमा रहेको कम पाइन्छ । जे सुकै सामाजिक संघ–संगठनमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पेशागत कामको साथसाथै पार्टीहरुबाट व्यक्तिगत रुपमा लाभहानी खोजेको हुन्छ ।
प्रचण्डले बाबुराम डिजाइनमा हुनुहुन्छ भन्दै आउनुभएको थियो । १० गते प्रज्ञा भवनमा भएको कार्यक्रममा देशदोह्रीसम्म भन्न भ्याउनभयो । यसमा तपार्ईंको प्रतिक्रिया के हो ? –मलाई व्यक्तिगत रुपमा धेरै दु:ख र खेदको महसुस भएको छ । एमाओवादीमा रहँु वा नरहुँ म प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रुपमा सम्मान गर्छु । किनभने एउटा किसान परिवारबाट आएर राजतन्त्रको अन्त गरेर प्रधानमन्त्री भैसकेका, अहिले पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक रहेको हैसियत प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँलाई नेपाली जनताले गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको राजनेताको व्यत्तित्वको रुपमा मानेका थिए । व्यक्तिगत रुपमा उहाँप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ । उहाँको अनुहार सम्झेर मर्न पाए हुनथ्यो भनेर आन्दोलनमा होमिएका हौँ । उहाँ जत्तिको व्यक्तिले आवेगमा आएर पुष्टी नभएका कुरा, पुष्टी हुन नसक्ने कुरा किन बोल्नुहुन्छ, यो उहाँको राजनीतिमा गंभीर नकरात्मक पाटो हो । सायद त्यहि कारणले राजनेताको अपेक्षा गरेका जनता निराश भए । एउटा अशोभनिय आरोप बाबुराममाथि लगाउनुभयो, मलाई व्यक्तिगत रुपमा छोयो । यस्तो आरोेपले बाबुरामजीको उचाई घट्दैन । उहाँको उचाई गिराएको छ । आफ्नै व्यक्तित्वलाई खसालेको छ ।
बाबुरामले असोज ९ गते एमाओवादी त्यागको घोषणा गर्नुभएको थियो । असोज ९ अगाडि र त्यसपछिका बाबुरामबीच फरक के पाउनुभयोे ? –विद्रोही हुँदा, आलोचक हुँदा र मुख्य जिम्मेवारी नलिदाको बाबुरामसँग यो काम भएन, त्यो काम भएन भनेर हिड्ने सुविधा हुन्थ्यो । आजको बाबुराम सानो ठूलो जत्रो शक्ति भएपनि पन्छिन नमिल्ने अबस्थामा हुनुहुन्छ । यही परस्पर विरोधी मैले देखेको छु । आलोचना, विरोध हुन्छ अव आफुले ग्रहण गर्नुपर्यो । हिजो यो कारणले भएन भन्ने ठाँउमा अव उहाँ हुनुहुन्न । आफै समस्या हल गर्नुपर्ने ठाँउमा हुनुहुन्छ । इतिहासमा पहिलो पटक उहाँ यो भूमिकामा हुनुहुन्छ ।